တက္ကသိုလ်ယောက်ျားလေးကျောင်းသားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာကြည့်ခြင်း။ အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2019) - Your Brain On Porn
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသားများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာကြည့်ခြင်းကြည့်ရှုခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2019)
YBOP မှတ်ချက်များ - ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြ,နာများ၊ လူမှုရေးပြ,နာများ၊ စိတ္တဇအောက်တွင်ကောက်နှုတ်ချက်များ။
Razzaq, Komal နှင့် Rafiq, Muhammad (2019) ။ အပြည့်အဝလေ့လာမှု၏ PDF ကို.
ပါကစ္စတန်အာရုံကြောသိပ္ပံဂျာနယ် (PJNS): Vol ။ ၁၄: ရာ။ ၄၊ အပိုဒ် ၇ ။
လေ့လာမှုပုံစံ - ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အရည်အသွေးရှိသောသုတေသနဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နည်းလမ်း - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြexploreနာများကိုလေ့လာရန်တက္ကသိုလ်ယောက်ျားလေး ၂၅ ဦး နှင့်နက်ရှိုင်းသောလူတွေ့မေးမြန်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများထံမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးနောက် NVivo11 Plus အားအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်အမျိုးအစားမျိုးဆက်များအတွက်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက်, အဓိကအမျိုးအစားသုံးခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ, လူမှုရေးပြissuesနာများနှင့်စိတ်ရောဂါဖြစ်သည့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပြissuesနာများအပေါ်ထုတ်ပေး.
အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြaffectedနာများ၊ သိမြင်မှုပြproblemsနာများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြthemesနာများပါ ၀ င်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုခံရသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများ၌သူတို့မြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤလိင်ဆိုင်ရာအစွဲများကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ ဦး တည်စေခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခြင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများက“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကကျွန်ုပ်ကိုမိန်းကလေးများနှင့်ဆက်ဆံရန်တွန်းအားပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်ချင်သည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်၊ ​​ငါလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လည်းသူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအာရုံမစိုက်ဘဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများက“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကိုခံစားနေရပြီးမပြည့်ဝတော့ဘူး၊ ငါဘာမှမသိဘူး၊ ငါဘာမှမအာရုံစိုက်လို့မရဘူး” စသည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းသည်လည်းယုံကြည်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နိမ့်ကျခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ၏အမျိုးအစားအောက်တွင်ထုတ်ပေးကွဲပြားခြားနားသော themes များပုံ3မှာပြသလျက်ရှိသည်။
တုံ့ပြန်မှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လူမှုရေးအရထိခိုက်ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံ (၄) တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပြသနာများရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အပြန်အလှန်မဆက်သွယ်နိုင်ဘဲတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ကြတယ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်ကြည့်ရှုပြီးနောက်သူတို့သည်အခြားသူများမှရှောင်ရှားရန်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါကအထီးကျန်ဖြစ်လာတယ်။ “ သူတစ်ပါးနဲ့မဆက်ဆံချင်ဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်မွေ့ချင်တယ်” “ လူတွေနဲ့မဆက်ဆံချင်ဘူး၊ တခြားသူတွေကြားမှာယုတ်ညံ့တယ်လို့ခံစားရတယ်” “ ဘာမှစိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ တခြားသူတွေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလား”
၎င်းတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ဤအမျိုးအစားသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြfromနာများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများအပေါ်တွင် မူတည်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြhealthနာများနှင့်ကွဲပြားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြsadနာများ၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းစသည်တို့နှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်နောင်တရ။ စိတ်ဓာတ်ကျလာကြသည်။ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများက“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းဟာစိတ်ပျက်စရာအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်၊ ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပြီးအစားအစာလိုအပ်နေသည်။
စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ “ ဒီနောက်မှငါအပြစ်ရှိတယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအပြစ်ကျူးလွန်မိတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်၊ ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးနောင်တယူတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပျက်မိတယ်။ ” အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်သူတို့၏ရန်လိုသောအပြုအမူများပါဝင်သည်။ ကြည့်ရှုနေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကသူတို့ကိုအသံတိတ်နေစေပြီးအပြန်အလှန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုတာကိုခံလိုက်ရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ ကျွန်ုပ်သည်ရန်လိုခြင်းနှင့်ဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်းများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သေးငယ်သောအရာများကိုပျင်းရိခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း” ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်နေတုန်းကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကမီးစွဲလောင်ခဲ့တယ်။ ငါဒေါသထွက်သွားတယ်။ ငါတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးအသံတိတ်နေတဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။ ” "ငါသည်ရန်လိုစသည်တို့ကိုဖြစ်လာခဲ့သည်"